Ukulungiswa kwemalimboleko-i-NJ & NY yearhente yeZindlu, uMkhenketha, uKhuselo loKutyhilwa kunye namaGqwetha asebambisayo
ikhaya / UkuLungiswa kweMali mboleko
Uhlengahlengiso lwemali mboleko iguqula imigangatho ye ekhoyo mboleko. Oku akuphikisi. Injongo kukwenza iintlawulo zifikeleleke ngakumbi okanye ukuvumela lowo ubolekayo athe wawa emva ekubambeni ukuba abambise. Ukuba umngcipheko osondeleyo wokuphulukana nendlu yakho ngenxa yokuchazwa kwangaphambili, kungcono ukuqala inkqubo ngokukhawuleza. Amagama ahlala eguqulwayo ngenqanaba lenzala kwaye ngamanye amaxesha ubude bemali mboleko. Ukuxolelwa kwamatyala akufane kunikezwe ukuhlengahlengisa ityala.
Qiniseka ukuba usebenzisa umthombo othembekileyo wokutshintsha kwemboleko yakho kwaye banikwe igunya lokuguqula imali mboleko yakho. Ukuba abanakukuxelela ukuba uyakufanelekela okanye ungahambi ngaphambi kokungenisa amaphepha akho kusenokwenzeka ukuba abanakulungela ukusebenza kulungiso lwakho. Kuya kufuneka bakwazi ukucacisa umyinge wetyala-kwimali engeniso kunye nokuba kuthetha ntoni kumathuba ohlengahlengiso. Ukuba awenzi mali yaneleyo yokuhlawula ityala lakho, thetha negqwetha ukuba lihambe kulo lonke ukhetho lwakho.
Zilumkele iiMeko zoMguquko zeMali mboleko e-NJ
Imeko ye-NJ inewebhu iphepha elinxulumene nalo Isilumkiso malunga nomsebenzi wokuLungiswa kwemboleko mali .
ENew Jersey iqumrhu kufuneka libhaliswe njenge-Adjuster yamatyala phantsi kwesenzo se-NJ Debt adjuster okanye into exempt.
Igqwetha-lomthetho leli lizwe elingabandakanyekanga njengecala lokuhlawula ityala;
Umntu osebenza rhoqo, umsebenzi osisigxina kumtyali, kwaye osebenza njengommeli wamatyala omqeshi wakhe;
Umntu osebenza ngokulandela nawuphi na umthetho okanye isigwebo senkundla, okanye elandela igunya eligunyaziswe ngawo nawuphi na umthetho weli lizwe okanye e-United States;
Umntu obolekwa ngumtyali, okanye iarhente yomtyali omnye okanye abangaphezulu, kwaye iinkonzo zakhe zokulungisa ityala lakhe lihlawulwa ngaphandle kwendleko kulowo unetyala; okanye
Umntu othi, ngesicelo somntu obolekayo, enze amalungiselelo okuboleka okanye enze imboleko-mali kulowo unetyala, ekugunyazisweni kwalowo unetyala, usebenze njengommeli wamatyala alowo ubolekayo kwimbuyekezo yemali mboleko, ngaphandle imbuyekezo ngenkonzo enikezelweyo kulungelelwaniso lwamatyala.
Ukuba umntu ocela ukuguqula imali-mboleko yakho angawi kula manqanaba angentla, unokukhathazeka kakhulu eNew Jersey.
Lumkela i-Scan yoLungiso lweMali mboleko kwi-NY
ENew York, iGqwetha lamaGqwetha Jikelele une IFomu yokuLungiswa kweMali mboleko kwi-Intanethi kwifom.
Ukusukela kwi-2009, iGqwetha Jikelele laseNew York besiphanda Ukutshixeka kwiindlela zokuhlangulwa. Ukuba uziva ngathi awurhafiswa mali, lumka.